Abavelisi kunye nabaXhasi beComputer Electronics | Ifektri yaseChina yokuChophela ngemveliso
Umgaqo wokusebenza kunye nentshayelelo: ikhawuntari ye-electro-mechanical counter-7, esetyenziselwa ukurekhoda amaxesha okuqokelelwa kweempawu zombane, akukho kuyilo lokusetha ngokutsha, ikakhulu kusetyenziswa kwisixhobo sokuhambisa amafutha, ukukhuphela oomatshini, kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kwi-chemistry, ilaphu, oomatshini, umgodi, ilizwe ukhuselo, ukutya kunye nomzi mveliso wokuprinta njl.njl. Inokudibana nezinye iimitha.
Umgaqo wokusebenza kunye nentshayelelo: ikhawuntari ye-electro-mechanical counter-8, esetyenziselwa ukurekhoda amaxesha okuqokelelwa kweempawu zombane, akukho kuyilo lokusetha ngokutsha, ikakhulu kusetyenziswa kwisixhobo sokuhambisa amafutha, ukukhuphela oomatshini, kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kwi-chemistry, ilaphu, oomatshini, umgodi, ilizwe ukhuselo, ukutya kunye nomzi mveliso wokuprinta njl.njl. Inokudibana nezinye iimitha.
I-ZD404 indibaniselwano kathathu-in-nye yezixhobo zokubala ezithandathu ze-elektroniki, ezisetyenziselwa ukurekhoda ingqokelela yamaqela amathathu eempawu zombane ngaxeshanye, ikhawuntari nganye enayo okanye engenaseti esezantsi. Isetyenziswa ngokubanzi kushicilelo, elukiweyo, oomatshini bokushicilela kunye nokudaya, isixhobo sokuvula amandla ombane, amandla ombane aphezulu okutshintsha ikhabhinethi kunye namanye amashishini.
JD6_III Amanani ama-6 oMbane oBala ukuBala
Ukusebenza komgaqo kunye nentshayelelo: Isetyenziselwa ukurekhoda amaxesha okuqokelelwa kweempawu zombane, kwaye ine-push-reset mechanism, kunye nezinye iimitha inokwenza izixhobo zedijithali, isetyenziswa kakhulu kwi-petroli chemistry, ilaphu, oomatshini, ukutya kunye nokuprinta Umzi-mveliso wokubala ukubola kombane. Iparameters zobuGcisa: Bonisa ubungakanani bamanani H x W: 4 x 2mm Max. ubungakanani bokubala okufumanekayo 999999 Uhlobo lweVoltage DC12-220V; Isantya sokubala se-AC24-220V AC, 4.0VA; I-DC, i-2.75W iqondo lokushisa elingu -10 ℃ - + 50 hum ubushushu obusondeleyo <85% Ubunzima be-150g
Umgaqo wokusebenza kunye neNtshayelelo: ikhawuntari ye-elektroniki enamanani ama-3 ngaphandle kokusetha kwakhona, indawo encinci kwaye kulula ukuyifaka. Imodeli ilungele ukusetyenziswa kwirekhodi ukuvuza ngoku kunye nesenzo sokubamba kunye nezinye izixhobo zombane eziphezulu njl njl, iipaneli zolawulo, oomatshini beshishini, kunye nezixhobo zovavanyo njl.